Herbal extracts Manufacturers & Suppliers - China Herbal extracts ụlọ ọrụ
luteolin dị ntakịrị soluble na mmiri, acidic adịghị ike, soluble na ngwọta alkaline, kwụsie ike n'okpuru ọnọdụ nkịtị.
Ọdụm Mane Hericium Erinaceus Wepụ Polysaccharides Powder
Ọ dị mma maka nchịkọta ma nwee ike iji ya mee ihe. Hericium erinaceus nwere ike zụlite akụkụ ahụ, ma gwọọ gastricism na-adịghị ala ala, ọnya duodenum na ọrịa ndị ọzọ. O nwekwara ike ime ka ndị mmadụ ghara ịna-alụso ọrịa ọgụ.
Ejiri mgbọrọgwụ dị ka aphrodisiac ruo afọ ma na-amụbawanye agụụ mmekọahụ nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, yana ọ nwekwara ike inye aka melite ogo nwoke na nwoke. enwe ike ịrụ ọrụ yana ọrụ ahụ mmadụ iji weghachi usoro ahụ ji arụ ọrụ nke ọma, nwere ike inye bo
100% Nature Garlic Wepụ Allicin Powder 1% CAS Mba. 533-86-6
1. Inyere aka igbochi oria na oria obi. 2. Na-ebelata ogo gị cholesterol ma nwee ihe nje antibacterial; 3. Ikike iji megide ọrịa na ọrịa;
herbal ogologo oge ọgwụ ọgwụ okra dị ọcha wepụ ntụ ntụ na ọnụahịa asọmpi
Okra (nke a makwaara dị ka gumbo), bụ ogologo na-eto eto, oge na-ekpo ọkụ, akwụkwọ nri kwa afọ site n'otu ezinụlọ dị ka hollyhock, rose nke Sharon na hibiscus. A na-eji pọd na-akabeghị aka maka ofe, canning na stews ma ọ bụ dị ka akwukwo nri eghe ma ọ bụ sie.